Mpanamboatra sy mpamatsy ny fametahana sy famatarana - Orinasa fametahana sy famonoana any Shina
Manana famaritana isan-karazany amin'ny satroka plastika aluminium isika. Vita tamin'ny volamena sy volafotsy indrindra, ny loko hafa dia azo namboarina ihany koa. Azo ampiasaina ho toy ny saron'ny tavoahangy plastika sy tavoahangy fitaratra izy io, ary ny fisehoana avo lenta dia mitazona sary kanto foana. Sehatra fampiharana: tavoara sakafo, siny makiazy, siny vatomamy, fonosana fanafody, fonosana fanomezana mahafinaritra. Ny vava satroka sy tavoahangy dia manana fampisehoana famehezana tena tsara, izay salama, azo antoka ary mafy ny rivotra. Ny gasket famehezana dia apetraka ao anatiny, izay mora ampiasaina. plastika fanosotra vita amin'ny plastika, azo antoka ary milamina amin'ny tontolo iainana, mahafinaritra ary matevina.
Saron-tavoahangy plastika porofon-zaza PP
Famaritana isan-karazany momba ny fonosana plastika PP miaraka amin'ny peratra fiarovana, misy loko azo amboarina. Izy io dia azo ampiasaina ho satroka amin'ny tavoahangy plastika sy tavoahangy fitaratra, ary ny fisehoana avo lenta dia mitazona sary kanto foana. Sakany fampiharana: siny plastika, tavoahangy fanosotra, tavoara fitehirizana, siny misy zava-manitra, siny cookie, siny plastika feno vava. Ny satroka sy ny vavan'ny tavoahangy dia manana fahombiazana famehezana tena tsara, izay salama, azo antoka ary azo entina amin'ny rivotra. Ny gasket dia apetraka ao anatiny, izay mora ampiasaina. siny plastika ho an'ny sakafo anti-bakteria sakafo, azo antoka sy sariaka amin'ny tontolo iainana, mahafinaritra ary matevina.
20-410 Sprayer Mist Plastika tsara miaraka amin'ny Hood mazava - 0.15cc Output 10 Dip Tube
Ny 18-410 Black Rib Side PP Fine Mist Sprayers dia zava-kendrena tsara indrindra ho an'ny famoahana vokatra ho an'ny fampiharana malefaka. Ny rafitra famoahana dia misy fantsom-boaloboka 10 ″ ary manome 0.15cc isaky ny mihetsika ao anaty zavona maivana, tsara ho an'ny fikarakarana manokana sy vokatra hatsaran-tarehy. mampiasa. Ny sisin'ny taolan-tehezan'ilay fanidiana dia mora ny manala sy mampihatra kaontenera.
18-410 flip plastika Cap-0.310 fanokafana Orifice
Matetika hita amin'ny shampoos, losion, gel fandroana ary vokatra fikarakarana manokana sy fikarakarana biby. Ny teknolojia famehezana ny clab claw dia afaka mametaka tavoahangy plastika maro amin'ny vozona 18-410 hatramin'ny farany ambony. 0.310 ″ fanokafana orifice.
108-400 White Rib Side Matte Top PP Plastika tsy tapaka mitohy
Ny tampon'ny vahaolana feno fonosana misy anao 108-400 sisin-taolana fotsy plastika fanakatonana kofehy mitohy. Ny savaivony lehibe M108mm dia mety amin'ny kaontenera vava malalaka toy ny siny plastika sy fitaratra. Ny sisin'ny taolan-tehezana dia manamora ny fampiharana sy fanesorana ny fanidiana. Mety amin'ny fampiharana sakafo izany. Ny liner koa dia miasa ho toy ny mitigator hamandoana, manakana ny hamandoana tsy hivoaka na hiditra ao anaty kaontenera izay mety hanakorontana ny tsy fivadihan'ny vokatra.
24-410 Kitapo fotsy lava volo plastika PP manery ny fonony
Ny fonosana lava misy ny lohany dia mora ampiasaina ary mora diovina. Tsy misy saron-doha mifatotra amin'ny sarony, ka tsy mila miahiahy momba ny famoizana azy ireo ianao. Manomboha kely ny toro-hevitra amin'ny habeny ary avelao ianao hanapaka ny tendron'ny habe mifanaraka amin'ny ilainao. Ahafahanao mahazo ny fanaparitahana mety na manome menaka na mikapoka pancake ianao. Kitiho fotsiny ny tendrony mba hifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Tonga lafatra ho an'ny BBQ, fitsangantsanganana ary maro hafa. Ankoatr'izay, manana fanoherana mahery vaika, asidra ary alkaly izy io. Tokony ho mpanampy tsara ao an-dakozia izy io, voadona, fanoherana ny hafanana avo, tantera-drano, lanja maivana. Mety amin'ny famoahana ketchup, mustard ary fitafiana amin'ny sandwich sy salady. Sakano ny satroka tsy ho raraka ary tazomy ny vaovao anatiny. Mora ny mandraraka, manisy marika ary mamantatra ireo fangaro tianao, na ranon-javatra hafa ao anatin'izany ny loko vita amin'ny asa-tanana sy ny vahaolana fanadiovana.
Fantsona plastika hafanana manohitra ny tavoahangin-jazakely. Ny paosin-tsolika namboarina manokana sy ny làlam-pandehanana tsy misosa amin'ny valanoranom-borona dia afaka mamihina tavoahangy, pacifiers, ranomandry na tanana hafa izay sarotra kokoa ny maka entana madinidinika. ny fahasalamana, ny vokatra afaka mahatohitra 110 ℃.